» के तपाईका छोराछोरी शहरमा बसेर पढेका छन् त ? यो भिडियो हेर्नुहोस्
के तपाईका छोराछोरी शहरमा बसेर पढेका छन् त ? यो भिडियो हेर्नुहोस्
११ असार २०७६, बुधबार १६:५३
हेटौँडा, ११ असार । हेटौँडाका युवाहरुले तयार पारेको लघु चलचित्र ‘वास्तब’ युवाहरुको कथावस्तुमा बनेको छ । लघु चलचित्र सस्पेन्सका साथै रोमान्टिक जेनरमा निर्माण भएको छ । विद्यालय तथा कलेजमा पढ्ने विद्यार्थीहरुको कुलत र यसले पार्ने असरका बारेमा चलचित्र केन्द्रित छ । आफ्ना अभिभावकबाट टाढा भएका विद्यार्थीहरुले कस्तो जीवन जिउँछन् र उनीहरुको दिनचर्याको गलत पाटो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चलचित्रमा देखाइएको छ ।
लघु चललचित्र हेटौँडाका चर्चित स्थानहरु पुष्पलाल स्मृति पार्क, नारायणी मल, लाली गुराँश होटल लगायतका क्षेत्रमा छायाँकन गरिएको छ । चलचित्रले हाल सहरमा बसेर अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुको कथा बोेकेको कलाकार बि.एन. धितालले बताए । लघु चलचित्रले विद्यार्थीहरुलाई कुलतको बाटोमा लाग्न नदिन सचेत समेत गराउने कलाकार दिपक सापकोटाले बताए । हेर्नुहोस् चलचित्र–
गालामा चुप्प गरेपछि सबै ठिक हुन्छ